Vol. 17 JULY, 1913. Nha. 4
HERE nyika haina rusununguko rwezvitema. Mune dzimwe nzvimbo dzenyika nguva yakawanda inopiwa kumweya; mune dzimwe nzvimbo, vashomanana vanhu vanofunga nezvavo. Ghosts ine simba rakasimba pamafungiro evanhu veEurope, Asia neAfrica. MuAmerica kune vashomanana vatendi mumweya. Asi mahedheni evanhu vemazuva ano uye anoremekedzwa ari kuwedzera, zvitsva zvirikudziridzwa, uye America inogona, mukubudirira kwevatadzi nemachechi avo, kubudirira kana kuvandudza pane izvo nyika yekare inayo.
Mune dzimwe nyika magumi ane simba uye akawanda kupfuura ayo muAmerica, nokuti vanhu vemarudzi iwayo vakachengetedza mweya yavo vari vapenyu kuburikidza nemakore mazhinji, asi muAmerica mvura yemvura yakashambidzwa pane zvikamu zvakawanda zvenyika; uye vakasara vagari vemativi akaoma vakanga vasina kukwana zvakakwana kuti vachengetedze mafuro evanhu vekare mararamiro aripo.
Kutenda mumweya hausi kwemazuva ano, asi kunosvika kumashure kumwana hwevanhu, uye usiku hwemazuva. Edza sezvavanokwanisa, kusava nechokwadi, kusava nekutenda uye mararamiro haagoni kukanganisa kana kuparadza kutenda kwevatadzi, sezvo madhimoni aripo uye ane mavambo mumunhu. Ivo vari maari uye kune iye, vana vake pachavo. Vanomutevera kuburikidza nemakore uye rudzi uye uye, zvisinei kana achiita kana asingatendi mavari, achaita, maererano nerudzi rwavo, vatevere kana kumutungamirira seanoita mumvuri wake.
Munyika yekare, madzinza nemadzinza akapa nzvimbo kune mamwe madzinza uye madzinza muhondo uye kukundwa uye nguva dzekubudirira, uye mweya nemadhimoni nemadhimoni vakaramba vari pamwe navo. Mafiro emunguva yakapfuura uye iripo iye zvino uye inofamba pamusoro penyika yekare, kunyanya mumakomo emakomo uye heaths, inogara yakazara mumitambo, nhema uye nhoroondo. Ghosts inoramba ichirwisana nehondo dzavo dzekare, kurota munguva dzorugare pakati pemagariro anozivikanwa, uye kuputika mupfungwa dzevanhu mbeu yehuchaita chiitiko. Nyika yenyika yekare haina kunge iri pasi pegungwa kwemakore mazhinji, uye gungwa harina kukwanisa kuinatsa nekuita kwemavura ayo uye kuisunungura kubva kumweya yevapenyu vakafa uye mafa evanhu vakafa uye nemweya kwete munhu.
MuAmerica, mararamiro apfuura akadzimwa kana kuvigwa; gungwa rakashambidza maturakiti makuru enyika; mafungu akaputsa uye akaparadza mweya uye zvizhinji zvehuipi hwebasa revanhu. Apo nyika yakauya zvakare yakange yakanatswa uye yakasununguka. Masango anotinhira nekugunun'una pamusoro pematurakiti kamwe akakuridzirwa; sango rerenje rinojekesa uko matongo emaguta anozvikudza uye ane vanhu vakawanda anovigwa. Musoro wezvikomo maketani aiva zviwi zvakasara zvakapararira zvemadzinza emarudzi, izvo zvakadzokorora nyika yakasviba pakubuda kwayo kubva kumvura yakadzika, isina mahwendefa ayo ekare. Icho ndicho chimwe chezvikonzero nei America inonzwa kusununguka. Kune rusununguko mumhepo. Munyika yekare rusununguko rwakadaro haruna kunzwa. Mhepo haina rusununguko. Mhepo yakazara izere nemweya yekare.
Mafunguro anowanzoitika kune dzimwe nzvimbo kupfuura zvavanoita vamwe. Kazhinji, nhoroondo dzevatendi dziri shoma muguta racho kudarika munyika, umo vagari vashoma uye vari pakati. Munharaunda dzemunharaunda pfungwa inotendeuka nyore nyore kune pfungwa dzemasikirwo emasikirwo nemafuta uye fairies, uye anovaudza zvakare nyaya dzezvo, uye anochengetedza zvipenyu izvo zvinoberekwa nemunhu. Mutaundi, kukurumidza kwebhizimisi uye kufara kunoita kuti vanhu vafunge. Varume havana nguva yevatadzi. Migwagwa yeLombard Street uye maWall Street haafaniri kufunga nezvevanhu. Asi kune zvipo zvinokonzera uye kuita kuti huvepo hwavo huve nekunzwa, sezvinongoitawo madhimoni emusango, chikafu kune rumwe rutivi rwegomo riri pedyo nesango rima, uye heaths pamuganhu wegomba.
Guta murume haasi munzwira tsitsi nemweya. Kwete zvakadaro gomo, varimi uye vafambisi vezvikepe. Maitiro anoshamisa anopa zviratidzo anoonekwa mumakore. Kupisa kwemafomu kunofamba pamusoro pemasango pasi. Vanofamba zvishoma nezvishoma pamucheto wegomba uye nenyasi, vanoita kuti mufambi wacho ave mungozi kana kumupa kunyeverwa. Nhamba dzakajeka uye dzomumhepo dzinofamba-famba mumashure nemapani kana kuti mhenderekedzo yega. Vanodzoka zvakare kuburikidza nezvimwe zvinoitika panyika; ivo vanoita zvakare kugadzira dhiyabhorosi inotyisa yemakungwa. Murume weguta haajairi kune nharo dzenhema dzakadai, anovaseka; iye anoziva kuti haagoni kuva echokwadi. Asi kusava nekutenda uye kuseka nevakawanda vakadaro, vakapa nzvimbo yekutendiswa zvakasimba uye kutya, mushure mekushanyira nzvimbo dzinotarisana nemamiriro ezvinhu anofarira maitiro emweya.
Pane imwe nguva nguva yekutenda mumweya inopararira zvakapfuura pane vamwe. Kazhinji izvi ndizvo zvakatevera kana munguva dzehondo, zvirwere, matambudziko. Chikonzero ndechokuti dambudziko uye rufu zviri mumhepo. Nechinguva chiduku uye asina kudzidziswa nekudzidza, pfungwa inoshandurwa kuva pfungwa dzekufa, uye shure. Inopa vateereri uye inopa hupenyu kumvuri yevakafa. MaMiddle Ages yaiva nguva yakadaro. Munguva dzorugare, kana kudhakwa, kuuraya uye kuparwa kwemhosva zviri pakuderera-mabasa akadaro anobereka uye anopfuurira mweya-mapfupa haana zvakawanda uye zvishoma muhuchapupu. Iko pfungwa inoshandurwa kubva kunyika yekufa kusvika kunyika ino uye hupenyu hwayo.
Mweya inopinda uye ichibuda kunze kwekuti kana kana kwete munhu anoziva nezvehupenyu hwavo, angave anopa zvakawanda kana zviduku kwavari. Nemhaka yevanhu, mapenyu anovapo. Kunyange zvazvo munhu achienderera seanenge ari kufunga uye ane zvido, mafumi acharamba aripo.
Nezvose zvinyorwa zvenhema zvakataurwa, zvinyorwa zvakachengetwa uye mabhuku akanyorwa pamusoro pemweya, zvinoratidzika kunge pasina urongwa hwemarudzi uye marudzi akasiyana-siyana emweya. Hapana rutivi rwemagumo rwakapiwa. Hapana ruzivo rwezvesayenzi rwevamwe vapenyu rwuri pedo, kuti kana munhu achiona mweya angaziva kuti ndechipi mweya. Mumwe angadzidza kuziva uye kusava nehanya nevatadzi semumvuri wake pasina kuvanetsa kana kunyanya kutungamirirwa navo.
Nyaya yacho ndeimwe yekunakidza, uye ruzivo rwayo runobatsira pane kufambira mberi kwevanhu, inokosha.
(Kuti ienderere mberi mumagazini yaAugust The Word)